Ukunakekela ubuhle sezinwele, izinzipho, isikhumba nje kuphela kudinga umsebenzi njalo ngokwabo, kodwa futhi nokuba nenqubo eyiyo lokhu. Kodwa indlela uma ungeyena usesikhathini emisha zakamuva, amathuluzi ezintsha emhlabeni izimonyo, imithi? Omunye enjalo amathuluzi awusizo ukuba azinakekele (ikakhulukazi ngenxa yokuntula umsoco umzimba) Amavithamini for izinwele nezinzipho ekhiqizwa ngokuzimisela yizinkampani ezithaka imithi futhi ithengiswe ifomu iphilisi.
Yiziphi izimpawu Ukhiye isenzo? Lapho kufanele ngiqale ukuthatha lezi amavithamini izinwele nezinzipho? Indlela esikhiqiza amafemu ukwethembana?
Lapho izinwele nezinzipho kudingeka baqiniswe, ngenkathi imikhiqizo ukunakekelwa nsuku zonke akwanele. Uma konke okunye yehluleka, kuba isignali omzimba ukuntula amavithamini kuwo. Izinwele ngobuningi iwe, isiphelile, zomile, ngaphandle ubukhazikhazi ophilayo futhi ibuyiselwe ithuluzi elinamandla yokutakula. Izipikili exfoliate, ikhefu, ayibi, kungakhathaliseki ukuthi zingakanani uma uzama ukwakha, awusebenzi banakekele, bheka esabekayo. Yiqiniso, kungcono kakhulu ukubonana nodokotela asikisele isikhathi ukuthola ukuthi kungani - umzimba ukuthi ulahlekile. Kodwa i-aphoyintimenti ezifana abizayo nge udokotela (trichologist, beautician) ngeke zembule iqiniso eyaziwa kakade - umzimba udinga amavithamini (lena, imbangela evame kakhulu ezivamile lezi zinkinga). I ukuntuleka kwamavithamini emzimbeni futhi ebonakalayo kumiswa obuningi dandruff ekhanda.
Ekhemisi okuthengiswa amaningi Vitamin izakhiwo, ezinye zazo kungaba ukuxazulula inkinga nje izinzipho nezinwele amavithamini yokudla okunempilo. Abesifazane ezivamile zanamuhla zisebenzisa amavithamini for izinwele nezinzipho, "Merz", "Ledi'S" "uLaval". Ngayinye yalezi izinhlelo unendlela yawo izici senzo. Ngokwesibonelo, amavithamini "uLaval" ukusiza ukuqeda ngisho uqhekeko semikhawulweni izinkinga izinwele, ngcono ziyaqothuka, izinzipho uyaxebuka, yokumatisa umzimba nge-amino acid, ukulandelela izakhi, namavithamini Yiqiniso. Izinzipho kuthiwa ekugcineni ukuqala ukukhula ifomu lesifanele, ngaphandle uhlobo futhi enze kube nokwenzeka ukuba abe manicure ehloniphekile, kubaluleke kakhulu kowesifazane yesimanje.
Amavithamini ukuqinisa izinwele
Ukuze kuqiniswe ukuchitheka izinwele, ukukhula kwabo kudinga esitebeleni Vitamin Iqembu B. Okuningi zonke saleli vithamini e amaqanda, uphizi, ubhontshisi, amantongomane, e- bran (bran wokudla okumnandi, konje!). Futhi kudingeka ukuba aqinise amavithamini E futhi A. Vitamin E kuyadingeka ukuze kwegazi ezinhle igazi ukuvimbela dandruff (noma ukunciphisa ke). Uvithamini A ubalulekile ukuze ukuzinza lokugayeka kokudla (yezimbangela eziyinhloko zezinkinga izinwele - kokunikezwa kwe-exchange), i-cell yokutakula, ukuvuselelwa (ukulungiswa). Kodwa lapha kufika eyinkimbinkimbi. Kunzima ukubala, lapho isamba amavithamini ufake umzimba. I wokutakula futhi eze ezithaka imithi Vitamin izakhiwo: "BIOS", "Nutrikap", "Merz Nobuhle" izinwele.
Amavithamini ukuqinisa izinzipho
Ukuze uqinise izinzipho Udinga amavithamini efanayo izinwele, kodwa kulolu hlu kunezelwa amavithamini C, PP. Uma ngaphezu ezipikili ngokuhlukana, zivela iphuzu eziyinqaba, amabala, izinzipho ukuthola umbala okungenamsoco, akusiyo kuphela ngenxa yokuswela amavithamini, kodwa futhi namaminerali.
Ezinye izakhiwo Vitamin bayakwazi ngokushesha ukubuyisela impilo izinzipho zakho. Eceleni bathuthukise izakhiwo ezinjalo awuthengiswa, kodwa ungasebenzisa amathuluzi ezengeziwe, bebanika ukudla ngaphandle: koqweqwe lwawo kungekho nto enemibala emihle, uwoyela nezinye izidakamizwa ehlukahlukene ukuze ziqinise futhi supply nail amavithamini, ukulandelela izakhi. It angathengwa at ekhemisi wedwa, uvithamini A no-E basihlikihle bayifaka ipuleti nail.
Ungakhohlwa ukuthi amavithamini for izinwele nezinzipho kungenziwa udle kanye nezinye indlela: ukudla okufanele! izinwele enempilo futhi incike emiphumeleni elimazayo: ukucindezeleka, imikhuba emibi, imvelo. Cabanga ngekutsi ungacala kanjani ukucindezeleka okubangelwa emzimbeni lezi zici, eminyakeni eminingi ukulondoloza intsha nobuhle, kukhanye nokuthandwa, saziswe. Akuwufaneli ke? ..
Engenhla zokuphefumula ipheshana Ukwelashwa "Erespal" ukulungiselela: bhukwana imfundo
"Radevit" (ukhilimu): yokusetshenziswa. Ukubuyekeza, analogue, intengo
Uyini inkomba for ukusetshenziswa "Vinpocetine"
Girona (Spain): yini ukubona ukuba sendleleni abahambi